PRINCE2 प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा शीर्ष प्रश्नहरूको उत्तर दिइयो! - ITS
15 नोभेम्बर 2017
PRINCE2 प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा शीर्ष प्रश्नहरूको उत्तर दिइयो!
प्रिन्सएक्सएनएमएक्स प्रोजेक्ट व्यवस्थापन क्षेत्रमा प्रमाणीकरणको लागी सबै भन्दा बढी देखिन्छ। परीक्षा लिन चाहे वा छान्नु भएन भने, त्यहाँ धेरै सम्भावनाहरू छन् जुन संभावित सम्भावना 'मनोविज्ञानमा पुग्न सक्छ। यी प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण, प्रकार, तयारी, प्रशिक्षण र सबै भन्दा अधिक दृष्टिकोण संग पहिचान गरिएको अधिकतर भागको लागि हो।
पर्याप्त मात्रामा हेर्दै जाँदा, हामीले प्रिन्सएक्सएनएमएक्सएक्स प्रमाणीकरणको सम्बन्धमा केही वास्तविक समस्याहरू संकलन गरेका छौं र तपाईंलाई सम्बोधन गर्न धेरै सक्षम शिक्षित छनौटमा सुचारु गर्न सक्षम छौं।
1। Prince2 प्रमाणन को प्रमुख लाभ के हो?
प्रिन्सएक्सएनएमएक्सएक्स प्रमाणनले तपाईंलाई उत्कृष्ट प्राप्त गर्न सक्षम गर्नेछ योजना व्यवस्थापन अल्पसंख्यकले यति सजिलै संग काम नगर्न सक्छन। यसले विभिन्न प्रविधि क्षेत्रहरूमा कार्यबल व्यवस्थापन, सम्पत्ति उपयोग, र खतरा मूल्याङ्कनमा तपाईंका क्षमताहरू अपग्रेड गर्नेछ।
परियोजना उपज नियन्त्रण गर्न तपाईंलाई सही तरिका देखाउँदा, यसले सर्वोत्तम को एक भाग मा नियोजित हुने आफ्नो बाधाहरू निर्माण गर्नेछ परियोजना व्यवस्थापन संस्थाहरू ग्रहमा
2। Prince2 प्रमाणन को प्रमुख विशेषताहरु के हो?
जाहिर छ, यो प्रत्येक सहयोगी को भागहरु को विशेषता हो जो विविध प्रकार को माड्यूल को निरीक्षण गर्दै छन्।
यसको सीधा र पोइन्टको बिन्दु दृष्टिकोणको कारण परियोजनाहरूमा प्रयोग गर्न सजिलो।
परियोजनाको माइक्रो व्यवस्थापन सहज रूपमा सम्पन्न हुन सक्छ किनकि यसले सानो मोड्युलमा कुल परियोजनालाई अलग गर्दछ।
3। प्रिन्सएक्सएनएमएक्सएक्स प्रमाणनका विभिन्न प्रकार के छन्?
त्यहाँ तीन राजकुमार2प्रमाणपत्रहरू छन्, विशेष गरी:
व्यावसायिक प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम
राजकुमार2आधारभूत पाठ्यक्रमले तपाईंलाई आवश्यक विचार, वाक्यांश, र रणनीतिहरू बुझ्न मद्दत गर्नेछ। प्रमाणीकरण र आवश्यक प्रशिक्षणको प्रभावकारी फलफूल पछि, एक विशेषज्ञ पाठ्यक्रमको लागि योग्य हुनेछ।
विशेषज्ञ पाठ्यक्रमले Prince2 प्रणाली र प्रविधिको प्रयोग गरी विभिन्न हालत र परियोजनाहरूमा हस्त रणनीतिहरू बुझ्न मद्दत गर्नेछ। यो पाठ्यक्रम सम्मोहन र प्रमाणनीय कम्युन्सिसको मिश्रण हो।
तेस्रो र अन्तिम कोर्स राजकुमार2व्यावसायिक प्रमाणीकरण हो, असामान्य अवस्था पर्यवेक्षकहरूको प्रयास।
तपाईंको प्रमाणीकरण पर्याप्त राख्न को लागी, यसलाई पुन: ताजा गर्न नियमित रूपमा अन्तरालहरूमा प्रमाणपत्र परीक्षा लिनुपर्दछ।
4। प्रिन्सएक्सएनएमएक्सएक्स प्रमाणीकरणको लागि तयार गर्ने?
जब तपाइँ यस प्रमाणिकरणको लागि तैयार हुदै छनौट गर्न विशिष्ट छनौटहरू छन्। एक घरमा अरू कसैको इनपुट बिना सेट अप र अन्य विकल्प प्रशिक्षणको लागि जान्छ।
एक आधिकारिक प्रिन्सक्सएनमक्स किताब प्रयोग गरी घरमा तयार हुन सक्छ। मानिसले तयारीको व्यवस्था गर्न अनि ब्याजको बिन्दुहरूमा पढ्नै पर्दछ। एउटा प्रयासमा विभिन्न चीजहरू व्यवस्थित गर्न प्रयास गर्नु पर्छ। सबै केहि महत्त्वपूर्ण छ र एकअर्कामा निर्भर हुन्छ।
तपाईं पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ: - प्रिन्सएक्सएनएमएक्सएक्स प्रमाणीकरणको लागि एक पूर्ण गाइड
प्रमाणीकरणको लागि व्यावसायिक कोचिंग लिनुहोस्
विभिन्न संस्थाहरूले प्रिन्सएक्सएनएनएक्सएक्स प्रमाणीकरण परीक्षामा प्रमाणीकरण प्रशिक्षण प्रदान गर्छन्। तपाईं अनलाईन विकल्पहरू हेर्नको लागि अनलाइन खोज्न सक्नुहुन्छ। यी प्रतिष्ठाहरूले प्रशिक्षकहरूको सामना गरेका छन्, सामग्री, प्रो नोटहरू र नक्कली परीक्षणहरूको बारेमा सोच्न सक्छन् जसले परीक्षाको लागि तयार हुन बुझ्न मद्दत गर्दछ।
तपाईं आधारित आधारित वेबमा आधारित हुनसक्दछ कि तपाइँसँग अनुकूलन कक्षाहरूमा जाने को लागी पर्याप्त ऊर्जा छैन। यी अनलाइन गेट्सले परिस्थिति र प्रतिबद्ध प्रशिक्षकहरू परिमार्जन गरेका छन् जसले तपाईंलाई पाठ्यक्रममा लिन मद्दत गर्नेछ।
कुनै पनि संस्था वा अनलाइन टाउको छनौट गर्नु अघि, केवल लक्ष्य र अतीत रेकर्डहरू अनुरोध गर्नुहोस् जुन तपाईले आफ्नो उद्योगको सबै भन्दा राम्रो बृद्धिको जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।
परीक्षा सफा गर्न केही सुझावहरू
मनोरञ्जनपूर्ण प्रतिक्रियाहरू पढ्नुहोस् - प्रश्नहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, त्यसैले तपाईंलाई प्रत्येक विकल्प तोड्न र सबै भन्दा राम्रो चयन गर्न आवश्यक छ। तपाईंको दृष्टिकोण को सबै भन्दा अनिवार्य उत्तर को बाहिर निकालन को लागी हुनु पर्छ र त्यस पछि प्रक्रिया को पुनःहत्या गर्नु पर्छ।
समय प्रबंधन भनेको कुञ्जी हो - एक 2.5 घण्टा मात्र हुन्छ, यसैले सुलभ समय अवधिमा प्रत्येक अन्त्यको अन्त्यमा आधारभूत आधार हो।
धेरै नक्कल परीक्षण गर्नुहोस् - मोक परीक्षण उम्मेदवारले परीक्षाको वास्तविक अनुभव प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ, र नक्कली परीक्षाका विभिन्न प्रबन्धहरूको साथमा, यो परिणाम गुप्त सक्छ र वास्तविकको लागि तयार हुन सक्छ। परीक्षा जस्तै तरिकामा।
त्यहाँ प्रिन्क्सएक्सएनएमएक्सएक्स प्रमाणनसँग कुनै पनि अन्वेषणको पहिचान छ, जुन अझै पनि जवाफ दिइएन? तपाईं टिप्पणीमा सोध्न सक्नुहुन्छ।
PMP V / s PRINCE2 प्रमाणपत्र बीच तुलना
PMP र PRINCE2 vs CAPM: मेरो लागि राम्रो छनौट कुन को हो?